HANUKEII WAA XORRIYAD
Waxaan nahay waxa aan ku nool nahay waxaanan ku nool nahay waxaan nahay. Hanukeii xoogaa way adagtahay in la sharaxo laakiin waa fududahay in la fahmo hadaad dareento. Waa dareen aan la soo koobi karin, kaasoo kaa dhigaya inaad taahato daqiiqadaas saxda ah, taas oo aad ugu dambeyntii ka warqabto in walwalkaagii lagaa tagay oo aad bilaabeysid inaad dareento farxad inaad ku raaxeysaneysid wakhti fiican.
Ma xasuusataa shucuurtaas inaad haysato markasta oo aad wax la kulanto markii ugu horreysay?
Sida goorma, safar dheer kadib, waxaad rogmaysaa daaqada gaariga oo hawadana u ogolaatay, waxaad ku tiirsan tahay daaqada daaqadiisa waxaadna bilaabeysaa inaad urinayso urka cusbada, urkaas badda oo naga buuxa farxad iyo reyn reyn. . Waa badda ku soo dhaweyneysa, kuna dhawaaqeysa inaad ku dhowdahay inaad gaarto.
Ama daqiiqadaas gaarka ah, ee aad ugu soo dhowaato xeebta xeebta, waxaad joogaysaa kabo la'aan waxaadna dareemaysaa sida ciidda jilicsan, ee bilaabanaysa inay cagahaaga u daboosho, ay ugu dhex siibanayso farahaaga dhexdooda mar kasta oo ay baddu timaaddo, iyadaa u socota, adoo cagahaaga nadiifinaya. marar badan, si aad ufudud tahay, oo aad ogaato in nolol maalmeedkaagu uu ahaan doono, hadda, hakad.
Waa dareenkaas ay neecowdu ku siinayso, ee u dhex guuxaya caleemaha calaacalaha, waxay shanleysa timahaaga, iyada oo ka dhex abuuraysa khadad cusub, oo iyaduna wejigaaga salaaxaysa, kuna dhiirigalinaysa inaad biyaha dhex gasho oo aad nolosha la kulanto. taas oo ah daqiiqad sax ah, taasi waa Hanukeii.
Nolol lugh cagaaran
Hanukeii waa xasillooni
Hanukeii waa midabka liinta ee qorrax dhaca oo ka muuqda badda deggan. Sidoo kale waa nabada aad dareemeyso markaad ka fiirineyso xeebta.
Hanukeii Waa aamusnaanta ay baddaleen mawjadaha kaa soo jabaya dhinacaaga.
Hanukeii waa nuxurka "dolce far niente", waa raaxo aan waxba la qaban. Waxaa loo kuur galayaa sida qorraxdu, iyadoo tartiib tartiib ah u socota, ay u gaarto meeshii ugu sarreysay cirka, iyo sida hadhow, si la mid ah sidii ay u soo baxday, ay haddana u soo degto.
Marka fudeydku noqdo kaamil, marka dhaqsiyaha, xad-dhaafka iyo xiisaddu waxay umuuqdaan inay katirsanyihiin xaqiiqo is barbar socota. Taasi waa Hanukeii.
Waa socod lugeyntii guriga habeenkii, iyadoo laga dareemayo badda asalkeeda si bilic leh u iftiimiyay dayaxa. Hanukeii Waa dareenka soo jeedka hurdada iyadoo la ogyahay inuu waqti jiro. Quraacda, inaad ku oroddo xeebta, in yar inyar seexato.
Waa seexashada xeebta dalladda hoosteeda ka dib markii ay ka soo baxday biyaha, waa khadka bikini ee cadcad ee ku xiga tananka maqaarka; Hanukeii waa wadahadal daacad ah, raaxo leh oo deggan galabtii.
Hanukeii waa, ka dib oo dhan, maxaa badanaa la raadiyaa: Hanukeii waa daqiiqad xasilloon.
WAA INAAD ILAAHAYNAA
Hanukeii Waa kala-goynta joogtada ah.
Waa daqiiqaddaas oo ay laamigu isu rogayaan ciid, gawaarida doomaha, boorsada loo rogo sagxadaha dushooda iyo ciribta kabaha.
Waa daqiiqad ka hor inta aanad fuulin diyaaradda, waa safarka tareenka, waxay fiirineysaa wadada daaqada gaariga halka aad qiyaaseyso daqiiqadda lagu arkaayo badda, xoogaa mugdi ku jira masaafada, cirifka. Waa dareenka xiisaha markaad ogtahay inay wax yari u baahan yihiin. Waa timaha taagan dhamaadka dhamaadka qoyaanka. Waa run marka ay dhaafto filashooyinka.
Hanukeii waa waqtiga la waayayo. Waa saacadaha uumi baxaya iyo saacadda illoobay khaanadda. Hanukeii waxay haysataa waqtiga oo dhan adduunka, waxay leedahay daqiiqad kasta, daqiiqad kasta iyo uga faa'iideysiga jawi deggan.
Dooni maayo maalinta inay dhammaato, sameynta kun qorshe, dhib malahan waqtiga aad seexato. Hanukeii Waxay awood u leedahay inaysan seexan si loo arko qorrax ka soo baxa.
Hanukeii Sidoo kale waa xusuusta qadhaadhka leh ee xeebta, qorraxda iyo ciidda oo sii socota inay marba marka ka dambaysa u muuqato kabaha dhexdooda, xitaa toddobaadyo yar ka dib markay ku noqdeen guryahoodii.
In kasta oo aan jecel nahay nuxurka iyo xaqiiqda, wali waxaan ku jirnaa casrigii dijitaalka sidaa darteed haddii aad rabto inaad na hesho, waxaad noogu soo diri kartaa farriin foomkan ah waana kaaga jawaabi doonnaa sida ugu dhakhsaha badan.